Idoxuridine Ophthalmic : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Idoxuridine Ophthalmic ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (herpes simplex virus – HSV) နဲ့vacciniaဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်ကြည်လွှာရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသဖို့အတွက်Idoxuridine ophthalmic ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်းတွေကိုကုသဖို့အတွက်Idoxuridine ophthalmic ကိုအများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Idoxuridine Ophthalmic ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Idoxuridine ophthalmic ကိုမျက်စဉ်းဆေးအနေနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုလိုက်နာရပါမယ်။
ဗူးအဖုံးလေးကိုဖွင့်ပါ။ မျက်စဉ်းဆေးတောင့်ရဲ့ထိပ်ပိုင်း (ဆေးရည်ထွက်လာမယ့်နေရာ)မှာကွဲရာ၊ပွန်းရာ၊ပဲ့ရာတွေရှိမရှိသေချာစစ်ဆေးပါ။ မျက်စဉ်းဆေးရည်ခပ်နောက်နောက်ဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုလည်းသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
မျက်စဉ်းဆေးတောင့်ကိုသင့်လက်မ၊လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်ပြီးကိုင်ပါ။ ပြီးရင်ဆေးတောင့်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုသင့်မျက်ခွံနဲ့နီးနိုင်သမျှနီးအောင်ထားပါ (ထိတော့မထိပါစေနဲ့)။
သင့်နောက်လက်တဖက်ရဲ့လက်ညှိုးကိုအသုံးပြုပြီးအောက်မျက်ခမ်းကိုဆွဲချပါ။ အချိုင့်ခွက်ခွက်လေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါချိုင့်ခွက်လေးထဲကို (ညွှန်ကြားထားတဲ့အစက်ရေအတိုင်း) မျက်စဉ်းစက်ချပေး/ခတ်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးအောက်မျက်ခမ်းကို၂ – ၃မိနစ်လောက်လက်ချောင်းလေးနဲ့အသာဖိထားလိုက်ပါ။ ဒါမှဆေးရည်တွေအပြင်မထွက်သွားမှာပါ။ မျက်တောင်မခတ်ပါနဲ့။
အဖုံးကိုသေချာစွာ ပြန်ပိတ်ပါ။ ကျပ်ကျပ်ပိတ်ပါ။ လက်နဲ့သုတ်ပစ်တာမျိုး၊ရေဆေးပစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Idoxuridine Ophthalmic ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Idoxuridine ophthalmic ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Idoxuridine ophthalmic ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Idoxuridine ophthalmic ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Idoxuridine ophthalmic ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Idoxuridine ophthalmic ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Idoxuridine Ophthalmic အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်နို့တိုက်နေခြင်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်သို့မဟုတ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေချိန်တွေမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ရှိမှသာဆေးဝါးတွေကိုသုံးစွဲသင့်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Idoxuridine ophthalmic သို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးတမျိုးမျိုးနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Idoxuridine Ophthalmic ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Idoxuridine Ophthalmic ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Idoxuridine Ophthalmic နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Idoxuridine ophthalmic ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Idoxuridine Ophthalmic နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Idoxuridine ophthalmic ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Idoxuridine Ophthalmic နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Idoxuridine ophthalmic ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Idoxuridine Ophthalmic ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
0.1% ပြင်းအားရှိမျက်စဉ်းဆေးရည် : ရောဂါဖြစ်နေတဲ့မျက်စိထဲကိုတနာရီတခါတစက်စီထည့်ပေးပါ။ သက်သာလာတဲ့အခါနှစ်နာရီခြားတခါထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တနေ့ကိုလေးကြိမ်ထည့်ခြင်းဖြင့်ဆေးသုံးစွဲမှုအကြိမ်ရေကိုလျှော့ချပါ။ မျက်စဉ်းဆေးကိုအနည်းဆုံး၇ရက်တိတိသုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Idoxuridine Ophthalmic ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Idoxuridine Ophthalmic ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Idoxuridine ophthalmic ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Idoxuridineophthalmicကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
doxuridine ophthalmic. http://www.mims.com/india/drug/info/idoxuridine. Accessed December 31, 2016.